Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Seychelles na-amachibido ndị ọkachamara njem okomoko si Spain
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Njem nlegharị anya akpụkpọ ụkwụ na-eburu ndị nnọchi anya Spain na njem
N'ịgbasi mbọ ike ahịa ya n'ahịa Spanish ka ọnwa ole na-adabere na kọntaktị na ndị mmekọ ya, njem Seychelles mere njem mmụta izizi ya n'oge na-adịbeghị anya maka obere ìgwè ndị nnọchi anya Spanish ọkachamara na njem okomoko.
Ndị ọrụ ahụ, ya na onye nnọchi anya Seychelles Tourism maka Spain & Portugal, bụ ndị e mere njem na isi obodo Victoria, na-enyocha akara ọdịnala na ebe ihe nketa.
Ahụmahụ ahụ dum ọ bụghị nanị kwalitere ihe ọmụma ha ka ha ree ebe ha na-aga nke ọma kamakwa ọ metụtara ha n'onwe ha.
Nke a ga-abụ uru mgbe ha na-akwalite ebe ndị ahịa ha na-aga.
Haziri na mmekorita ya na Qatar Airways, Constance Hotels na Resorts Seychelles na nkwado nke ndị mmekọ ahia na Seychelles, nleta ụbọchị 5, nke mere mmalite nke Ọktọba, iji mee ka ọhụhụhụ maka ebe a na-aga.
Ndị ọrụ asatọ ahụ so Monica González Llinás, ndị Njem nlegharị anya Seychelles Onye nnọchi anya Spain & Portugal, ka a kpọrọ njem gaa n'isi obodo Victoria, na-enyocha akara ọdịnala na ebe ihe nketa. N'ịga n'ihu, ha gara ebe UNESCO World Heritage Site Vallée de Mai na Praslin yana ịgagharị n'àgwàetiti ndị ahụ. N'ime oge niile ha na ndị mmekọ dị iche iche zutere n'oge nleta ha dị mkpirikpi, a na-emeso ndị ọrụ Spain ahụ ụtọ nke ọbịa Seychellois a ma ama.
Nwada González Llinás kwuru, sị: "Mgbe anyị kwalitechara Seychelles n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị mmekọ Spanish anyị, ọ dị mma n'ikpeazụ ka ha hụ ebe anyị na-aga n'onwe anyị," ka Oriakụ González Llinás kwuru, na-ekwu na ahụmịhe ahụ bụ otu ndị nnọchite anya, nke sitere n'ike mmụọ nsọ mara mma nke agwaetiti ahụ na nnabata a na-anabata ya. ha natara, ga-echeta mgbe niile ma nyere ha aka mgbe ha na-ere ezumike na ebe.
Ọ kelere ndị ọbịa Qatar Airways, Constance Group ebe ntụrụndụ Ephélia na Lémuria, yana ụlọ ọrụ njikwa ebe Mason's Travel, Creole Travel Services na 7º South ndị nyere ngwaahịa na ọrụ dị iche iche iji mee ka mmemme ahụ gaa nke ọma.
"Anyị nwere ekele maka ndị mmekọ anyị maka ịnabata ndị ọrụ ahụ. Ahụmahụ ahụ dum ọ bụghị nanị na-eme ka ihe ọmụma ha dịkwuo mma iji ree ebe a na-aga nke ọma kamakwa ọ na-emetụta ha n'onwe ha, nke anyị kwenyere na ọ ga-abụ uru mgbe ha na-akwalite ebe ndị ahịa ha na-aga, "Ms. González Llinás kwuru.
“Enweela mmụba na mmasị maka gaa Seychelles kemgbe Machị 2021, mgbe ndị bi na Spen nwetara ọkụ ndụ ndụ ka ha gaa na agwaetiti,” Nwada González Llinás gbakwụnyere, na-ekwupụta na ndị ọbịa 2 si Spain gaa Seychelles ruo afọ a. Ahịa isi mmalite mepụtara mmadụ 296 bịarutere na 4,528.